सिईडिबि हाइड्रोपावरको नाफा ४९ प्रतिशत बढ्यो | आर्थिक अभियान
सिईडिबि हाइड्रोपावरको नाफा ४९ प्रतिशत बढ्यो
वैशाख ३०, काठमाडौं । सिईडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनीले चालू आर्थिक (आव) को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण शुक्रवार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको नाफा चालू आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ४९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कम्पनीले गत पुस मसान्तसम्ममा रू. ७ करोड १५ लाख नाफा कमाएकोमा चालू आवको चैत मसान्तसम्म बढेर रू. १० करोड ७० लाख पुगेको हो ।
तीन महीनाको अवधिमा कम्पनीको आम्दानीमा वृद्धि भएकाले नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो । उक्त अवधिमा कम्पनीको ब्याज आम्दानी रू. ४ करोड ७६ लाख रहेको छ । त्यस्तै सेवा शुल्क रू. १० करोड ७१ लाख रहेको छ । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८३ करोड ९४ लाख रहेको छ भने जगेडामा रू. ३७ करोड ३७ लाख सञ्चित गरेको हो ।
चैत मसान्तसम्म कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १७ दशमलव शून्य १, मूल्य आम्दानी अनुपात ४५ दशमलव ३८ गुणा, तरलता अनुपात ९ दशलमव ४२ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १४४ दशमलव ५३ रहेको छ ।